Aretina kitrotro eto Madagasikara Olona 4.600 no efa voa…
Niaiky ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka Rantomalala Yoel omaly fa tena mahazo vahana eto amintsika ny aretina kitrotro. Efa tafakatra 4.600 hatreto ireo olona lasibatra, tarehimarika azony farany tamin’ny alatsinainy lasa teo.
Iray kosa no nambarany fa namoy ny ainy. Tsy eto amintsika ihany no mahazo vahana io aretina io, hoy ny minisitra. Any Frantsa, ohatra, dia nambarany fa efa folo volana izao no nampahazo vahana azy, enim-bolana ny tao Maorisy. Nanomboka tamin’ny volana oktobra kosa ny antsika teto Madagasikara izay nomarihiny manokana fa vokatry ny tsy fanaovana vaksiny avokoa. Ny nahavariana dia nisy foana ny tolotra fanaovam-baksiny maimaimpoana tao anatin’ireo herinandro ho an’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza natao isaky ny enim-bolana saingy tsy nisy taitra ny olona, hoy izy. Ny 25 %-n’izy ireo ihany no namaly ny antso ka nampahazo vahana ny aretina. Ny fanaovam-baksiny ihany anefa no vahaolana ankoatra ny fitsaboana ireo efa marary. Nantitranteriny kosa fa manana hery fiarovana mandrakizay ireo olona efa voan’ny kitrotro. Ireo tratry ny tsy fanjarian-tsakafo kosa no nambarany fa miditra hopitaly amin’ny ankapobeny raha mbola voatsabo tsotra ihany ireo ampy sakafo ara-dalàna. Tsiahivina fa maro amin’ireo olona vita vaksiny no mbola lasibatr’ity aretina kitrotro ity ihany.